काकीमा छुट्टै आत्मबल जाग्थ्यो होला ।काकीको आखाँमा देख्थे सुन्यता| Nepal Pati
उ यस्ती नारी
धरैले प्रसंंसा गर्थे । काकी असाध्यै राम्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सुन्दरताको वर्णन गर्ने त कती थिए कती । काका सधै भन्ने गर्नूहुन्थ्यो लक्ष्मी त साह्रै राम्री छस् मलाई केही भएपनी त अर्को बिहे नगर्नु । कस्तो अचम्म ! यसलाई धेरै माया भनु कि इश्र्या ? म नभए पनि त खुसी भएर बस्नु ,मेरो बिनापनि आफ्नै अस्तित्व बनाउनु यति किन भन्न सक्नुभएन काकाले ? त्यति मात्र भनिदिएको भए पनि त काकीमा छुट्टै आत्मबल जाग्थ्यो होला । के काकाको मानसीकता नै कमजोर थियो त ? त्यसो त काका काकीभन्दा उमेरमा जेठोबाठो नै हुनुहुन्थ्यो ।
सायद अलि अलि अहम् थियो उहाँमा,,, । काका एकदमै जिद्दि स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । पढाईमा एकदम अब्बल अनि सरकारी जागीरे काका, सायद कतै न कतै घमण्ड लुकेको थियो होला । तर पनि काका काकीको अगाडी झुक्न तयार हुनुहुन्थ्यो । साच्चै काका काकीलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो । रिस उठ्दा काका सधै पिउनु हुनथ्यो । रक्सीको नसाले उहाँलाई मानौ अन्धो नै बनार्इ दिन्थ्यो ।
तर पनी काकीको कती कोसीसले छोड्ने बाचा चाहि दिनु भएको हो । काका जति नै रिसाहा भएपनि काकी आफ्नो कुराको पक्का हुनुहुन्थ्यो । जहाँसम्म म सम्झन्छु काकाले कतिपटक घर छाडेर जाने धम्की पनि दिनुभएको हो । धेरै पिउने नसाले काकी थकित हुनुहुन्थ्यो । नसाबिना काका काकीलाई असाध्यै प्यारो हुनुहुन्थ्यो किनकि नसामा त काका काकीलाई नै बिर्सनु हुन्थ्यो ।
म सम्झन्छु ,अलि अलि एकदिन यहि बिषयमा काका काकीबीच एकदम चर्काचर्की चलेको थियो । त्यसपछि काका हिड्नुभयो अनि घर नै आउनु भएन । त्यो रात काका आउनु नै भएन । काकाको कति खोजी भयो, कस्तो बिडम्बना बाहिर हराउनेलाई त खाेजिएला तर आफ्नै आगनबाट हराउनेलाई के भन्ने ? मलाई याद छ काकीको त्रसीत मुहार अनी सम्हाल्न नसकिएका ती आखाँहरु । ती आखाँहरुले सायद काकालाई खोज्दै थिए र प्रश्न गर्दै थिए म बाट के भुल भयो ? त्यसो त काकी जस्तो टाठीबाठी मान्छे घर गृहस्थी मात्र सम्हालेर बस्नुभयो । काकीमा धैरै क्षमता थिए तर आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्नै पाउनु भएन ।
काकाले नै रोक लगाउनु भएको हो रे तर काकी केही बोल्नु भएन ,,,, काकाको कमाई पनि राम्रै थियो । सामान्य सिलाई बुनाईको काम काकी घरमै गर्नुहुन्थ्यो । सायद त्यो बेला काकी सम्पन्न महसुस गर्नुहुन्थ्यो कि ? सायद काकीलाई काका प्रति अथाह विस्वास थियो कि यस्तो अवस्था आउदैन भनेर । घर ,परिवार कसैले सोचेको नै थिएन कि काका यसरी एकाएक गायब हुनुहुन्छ भनेर । सुन्नमा आएको थियो रे कि काका एकपटक इण्डिया भेटिएको खबर । हामी कति खुसी भएका थियौ , काकीको आशाको सीमा नै थिएन । तर खबर हल्ला मात्र भयो ,,पूर्ण कुरा पत्ता लाग्नै सकेन । उहाँको एक मात्र सन्तान मुना । अनि उसको निराशा म व्यक्त नै गर्नै सक्दिन । अनि काकी काकी के गर्नु हुन्छ होला ? अब काकी एकदम एक्ली हुनु भएको छ । के भनेर संज्ञा दिउ म काकीलाई ? ऊ कस्ती नारी ?अपूर्णतामा पनि काकीले पूर्णताको काम गरिरहनु भएको छ । छोरीलाई र्हेर्ने काम र घर त सम्हाल्नु हुन्छ काकी तर आफ्नो एक्लोपना र सुन्यतालाई कसरी मेटाउन हुन्छ काकी ? बाहिर त हाँस्नुहुन्छ तर भित्र काकी भित्रभित्रै जलिरहनु हुन्थ्यो । ठूलाठूला आँखा अनि मिलेको दाँत काकीको मुस्कान कति मिठो थियो ।
म काकीको आखाँमा देख्थे सुन्यता र बिलाएका रहरहरु । काका हराएपछि त काकीको मुहारको चमक नै हराएको थियो । सायद काकीको सुन्दरता काकाको उपस्थितिमा थियो होला । फेरि काकी अगाडि बढ्न चाहानु हुन्छ कि तर समाज के भन्छ । यहाँ कुरा सधै समाजमै आएर रोकिन्छ । के भनेर बोलाउने काकीलाई ? श्रीमानले छोडेर गएकी एक्ली नारी जो आफैसँग सङघर्ष गर्दैछे । अनि काकीले लगाएको सिन्दूरको केही अस्तीत्व छ त ? खै किन शास हुन्जेल आस पनि हुने रहेछ । फेरि कसलाई कुरेर बसीरहनु भएको छ काकी ? कतिपटक त मलाई पनि काकीसँग प्रस्न गर्न मन थियो काकी अब बिहे गर्नु हुन्न ? समाजमा यस्तो घटनासँग जुध्ने कति छन् कति ।
तर अगाडि बढेर नयाँ जिवन सुरु गर्ने कति कम । कतै न कतै समाजको डरले खान्छ होला जसले गर्दा काकी जस्ता हजार काकी अगाडी बढ्नै सक्दैनन् । किन र ? नयाँ जिवन बसाउन काकीलाई किन यति असहज ? भन्न त कति कुरा भनिन्छन् । काकीको बारेमा भएका कुरा पनि मैले सुनेकी थिए । ऊ आफै कमजोर थिई, घर व्यवहार धान्नै सकिन । तर काकी जत्तिको बहादुर मान्छे मैले आज सम्म देखिन । एक्लै सबै कुरा धानेर आँसु लुकाउनु हुन्छ काकी । बहादुरी र धैर्यताको कुन सीमा नाघ्नु पर्छ र मान्छेको बोली बन्द गर्न ? भन्नेले त भनि रहन्छन् । आफ्नो काम गर्न छोड्नु हुन्न । यहि कुराले काकीलाई काम प्रति प्रेरित गर्छ होला । तर किन कसैले सोधेन काकीलाई काकीको इच्छा ?उमेरमै काकी बुढी हुनुभएको छ । जीवनका नयाँ र रङ्गिन सपनाहरु बुन्नको सट्टा अधुरा सपनाहरुमा अड्किरहनु भएको छ काकी ।
काकीलाई नयाँ सपनाहरु बुन्ने पूर्ण अघिकार छ । फेरि अगाडि बढ्ने पूर्ण स्वतन्त्रता छ । सायद समाजलाई पचाउन समय लाग्छ होला तर रोकिने ठाउँ त छैन नि । हो पितृ सतात्मक समाजको अन्त्य बिस्तारै होला । तर लक्ष्मी जस्ता काकीहरुलाई खुलेर जिउने पूरा पूरा अधिकार छ । आज पनि कतै न कतै कयौं काकीहरु यसरी नै अधुरा आशाहरुमा बल्झिरहेका छन् । कयौको आवाज दबिएको छ । सायद साहयताको कमी छ । या त आवाज उठाईदिनेको कमी ।
यो त एक समाजको घटना मात्र हो । यस्ता घटना त कति छन् कति । न त यहाँ पुरुषको विरोध गरिएको हो , न त नारीवादको पूजा । यहाँ त केवल समाजको एउटा चित्रलाई मात्र देखाईएको हो । प्रगतिसिल समाज भईकन पनि कति ठाउँमा यस्ता चित्र द्खिन्छन् । कति समाजमा अझै पनि कमजोर मानसिकता छन् । मुख्यत यो लेख्नुको उद्देश्य पनि यहि थियो । आशा छ अबको नयाँ समाजले भने काकीलाई पूर्ण रुपमा मद्दत गर्ने छ ।